လွယ်ကူသော Origami Fox မျက်နှာ လက်မှုပညာ
လွယ်ကူသော Origami Fox မျက်နှာ
ဂျဲနီရေတွင်း | | လက်မှုပညာ, စက္ကူလက်မှုပညာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာငါတို့လုပ်နေတဲ့ကိန်းဂဏန်းများကိုတတိယမြောက်လွယ်ကူသောအော်ဂဲနစ်ပုံကိုဖန်တီးပေးသည်။ ဒီအချိန် ကျနော်တို့စက္ကူနှင့်အတူရှိ fox ၏မျက်နှာကိုလုပ်မယ့်နေကြသည်။ Origami သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုထက်မြက်စေရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အသက်အရွယ်တိုင်းအတွက်အကြံပြုသည်။
1 ကျွန်ုပ်တို့မြေခွေးကို origami နှင့်မျက်နှာပြုရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့မြေခွေးကို origami နှင့်မျက်နှာပြုရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများ
စက္ကူသည်၎င်းသည် origami အတွက်အထူးစက္ကူသို့မဟုတ်အလွန်ထူထပ်သောကြောင့်ပုံသွင်းရန်လွယ်ကူသောမည်သည့်စက္ကူအမျိုးအစားမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။
ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြေခွေးမျက်နှာကိုလုပ်ရန်လိုအပ်မည့်အခြေခံပုံကိုဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ ကျနော်တို့စတုရန်းကနေစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိန်းဂဏန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စတင်မည့်အခြေခံစတုရန်း၏ထက်ဝက်ကဲ့သို့ကြီးမားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့နေရာမှာစတုရန်းထား၏ ၎င်းသည် rhombus တစ်ခုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တြိဂံတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်တစ်ဝက်တွင်မျောပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိန်းဂဏန်းကိုဆက်လက်မဆောက်ခင်တက်တြိဂံကိုထားခဲ့လိမ့်မည်။
ထိုအဆင်သင့်! ငါတို့တတိယမြောက်လွယ်ကူသောအော်ရီဂျီယာကိုလုပ်ပြီးပြီ အကယ်၍ သင်သည်ယခင်ကိန်းဂဏန်းများကိုကြည့်လိုပါကဤနေရာတွင်ကြည့်နိုင်သည်။
လွယ်ကူစွာခွေးမျက်နှာ လွယ်ကူသော Origami ခွေးမျက်နှာ
ဝက်မျက်နှာလွယ်ကူခြင်း လွယ်ကူသော Origami ဝက်မျက်နှာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » လွယ်ကူသော Origami Fox မျက်နှာ
လွယ်ကူသော Origami ဝက်မျက်နှာ